Author: Nazilkree Samusar
Inta laga gaarayo aburitaanka Guddiga Doorashada Puntland ee rasmiga ah, waxaa jiraya Guddiga Doorashada Puntland ee ku meelgaarka oo ka puntlanx 9 xubnood sida ku cad lifaaqa 1aad ee Dastuurkan.
Shaqaalaha iyo loo shaqeeyayaashuba waxay xaq u leeyihiin iney yeeshaan ururro maareeya una dooda danahooda. Eedaysanaha laguma khasbi karo qirashada dembiga loo haysto.
AP — Forensic experts testified about DNA evidence during the second week of a federal trial involving several defendants accused of using a young Somali female for forced prostitution. Haddii uusan Golaha Wakilladu ogolaanin Miisaaniyadda cusub ee Dawladda sanadka bilowgiisa, sabab kasta ha ku timaadee, waxaa lagu si dhaqmayaa miisaaniyadda sanadkii hore ilaa midda cusub laga ogolaanayo.
Waxaa reebban in la soo rido ilmaha caloosha hooyada ku jira, haddii aanay jirin xaalad adag oo hooyada nolosheeda khatar gelineysa, uuna caddeeyo dhakhtar aqoonteeda leh. Madaxweynuhu, isaga oo la tashanaya Madaxweyne ku-xigeenka wuxuu soo dhisayaa Xukuumadda 21 beri gudahood laga bilaabo markii la doortay.
Qoysku waa aasaaska bulshada, waxuuna xaq u leeyahay in sharcigu daafaco. Dhismaha Ururrada Dhallinyarada iyo Barbaarintooda waxaa qeexaya xeer gaar ah. The 6’2 forward was selected with the first pick of the punntland round 13th overall and is the first Somali to be drafted in the WNBA. Dastuurka ayaa dammaanad qaadaya xuquuqda dadka laga tirada badan yahay. Golayaasha Degaanka waxaa dooranaya muwaadiniinta degmo kasta muddo shan 5 sano ah, dibna waa loo soo dooran karaa.
Habka siyaasadeed ee Dawladda Puntland wuxuu ku saleysan yahay mabaadiida hogaamineed ee: Gobol waliba maamul ahaan wuxuu u qaybsamayaa degmooyin. Guddiga waajibaadkiisu waxa ay noqonayaan in ay Dawladda kala taliyaan arrin kasta oo khuseysa Shareecada Islaamka, gaar ahaan marka looga baahdo iswaafajinta Shareecada Islaamka iyo Xeerarka Puntland.
Inuu daafaco xuquuqda aadanaha ee Dastuurka iyo shuruucda kale ay qeexayaan. Hindisaha wax ka beddelidda Dastuurka waxaa soo jeedin kara: Puntalnd madaxda Dawladda Puntland waa Magaalada Garoowe waana fadhiga dawladda. Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub. Xukuumadda ayaa diyaarineysa xeer gaar ah oo lagu qeexayo dhismaha, habka iyo awoodaha Maxkamadda Dastuuriga, waxaana ansaxinaya Golaha Wakiillada.
Daxtuurka kasta oo Goluhu meelmariyo waa in laga sameeyo saddex nuqul oo rasmi ah oo ay saxiixaan hoggaanka Goluhu loona diro Madaxweynaha. Sarkaal ama shaqaale kasta ee dawladeed oo si xun u maamula, lunsada lacag, hanti kale ee ummadeed ama ka qaybgala fal-dembiyeedyadaas, wuxuu geystay dembi culus, wuxuuna mudanayaa ciqaab u dhiganta faldembiyeedka uu galay sida uu qabo Xeerka Ciqaabta iyo inuu soo celiyo dhammaan hantidii uu dayacay ama lunsaday.
Garsoorayaasha Maxkamadaha Sare, Dastuuriga, Rafcaanka iyo kuwa Derejada Koowaad lama xiri karo haddii aan lagu qaban, iyagoo faldenbiyeed gacanta kula jira, degaankooda iyo gaadiidkoodana lama baari karo, dacwadna laguma oogi karo, haddii dsatuurka Guddiga Sare ee Garsoorku ogolaan codsi ka yimid Xeer-Ilaaliyaha Guud oo la xiriira in Golaha Wakiillada xasaanadda ka qaado.
Suspected Somalia pirate base hit by war planes – AFP. Madaxweynuhu wuxuu billado iyo shahaado sharafyo guddoonsiiyaa muwaadiniinta Puntland iyo kuwa ajnebiga ah ee mutaysta. Faroole ayaa khudbadiisa ku beeniyay hadalo shalay ka soo yeeray Wasiirkii hore ee Howlaha Guud, Cabdirashiid Maxamed Xirsi, ahna xubin beesha Tanade, una doodaya kordhinta kuraasta baarlamaanka beeshiisa.
Afarta xubnood ee Maxkamadda Dastuuriga ah ee laga soo xulay dasturuka waxay dhammaan dasttuurka kala mid yihiin garsoorayaasha Maxkamadda Sare.
Madaxweynuhu wuxuu leeyahay awoodda saamaxaadda iyo cafiska dembiyada siyaasadda iyo kuwa kaleba. Haddii uu Goluhu ku dhawaaqo Sharci intifaac caam ah leh, Madaxweynuhu wuxuu qabaa in uu ku saxiixo, kuna faafiyo ama ku diido shan iyo toban 15 maalmood gudahood. Dawladda Puntland waxa ay yeelan doontaa Calan, Astaan iyo Heesta calanka oo u gaar ah. Sharci gaar ah ayaa tilmaamaya dhammaan arrimaha la xiriira diyaarinta, oggolaanshaha, dhaqangelinta iyo warbixinta natiijada miisaaniyadda.
Qofna madaxbannaanidiisa lagama qaadi karo, xannibaad kasta oo lagu sameeyana waa inay sharciga ku caddahay. Awoodaha Dawladda Puntland ay ku wareejin doonto dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo xuquuqaha ay yeelanayso Puntland, waxa ay ku imaanayaan wada xaajood iyo heshiis dhexmara Dawladda Federaalka iyo Dawladda Puntland, laguna qeexi doono Dastuurka Federaalka ee Soomaaliya.
Wuxuu Isimada Puntland ee meesha fadhiyey si qayaxan ugu sheegay in tani aysan ahayn hawl u taal isimada. Dezmonde help and support center. Haddii baaritaanka uu ka soo baxo fal-dambiyeed, Hantidhawrka Guud wuxuu kiiskaas oo ay la socdaan qoraallada ka marag kacaya u gudbinayaa Xeer-Ilaalinta Guud si dacwad loogu oogo.
Wax ka beddelidda Dastuurka waxaa lagu baahinayaa Faafinta Rasmiga ah loomana cuskan karo diidmada qayaxan ee Madaxweynaha.
Sharci iyo xeer-hoosaadyo u gaara ayaa caddeyn doona xadaynta xaqa dhaq-dhaqaaqa. News in English Wafdi heer sare ah oo ka socda dalka Eritrea ayaa maanta waxa ay gaareen caasimadda Itoobiya ee Adis Ababa. Muwaadin kasta waxaa waajib ku ah: Dastuurku ma kitaaba marka uu leyahay lama badalikaro teeda kale isagu ka mid maaha isimadana manaha hogaamiyasha talada haya oo shaqsi ixtiraam mudan waa inuu ka fiirsado hadalka uu ku hadlayo.
Haddii Madaxweynuhu aanu diidmo ka muujin waa inuu saxiixo, dasruurka u diro Golaha Wakiillada isla markaasna amro in faafinta rasmiga ah lagu soo saaro, nuqulna lagu kaydiyo Madaxtooyada. Golaha wakiillada waxaa mashruuc-sharci horgeyn kara oo keli ah: Maxkamadda Sare waxay Golaha Wakiillada ddastuurka soo jeedisaa abuuridda maxkamado cusub. Hawlahaas waxaa nidaaminaya xeer gaar ah oo ay Xukumaddu dusha ka ilaalineyso.
Guddi-hoosaadyadu waa inay isugu dheellitiran yihiin xoogagga siyaasadda ee uu ka koobanyahay Goluhu, waxayna u xilsaaran yihiin diyaarinta, lafaguridda, iyo soo jeedinta arrimaha Goluhu ka doodayo. Qofka maxbuuska ahi waxa uu xaq u leeyahay daryeel caafimaad, cunto iyo waxbarasho.
Ciidamada Nabadgelyadu waxay u xilsaaran yihiin sugidda amniga gudaha iyo xuduudaha Dawladda Puntland, waxayna ka kooban yihiin:. 212 gaar ah ayaa nidaaminaya waxbarashada gaarka ah. Awoodaha maxkamadda rafcaanku waxa ay ku egtahay gobolkeeda.
Haddii xubin ka mid ah Golaha Wakiillada ay lumiso xubinnimadeeda waxaa dasturuka soo galaya qofka sharci ahaan u leh. Dambiyada iyo khaldaadka aan cuslayn oo ay galaan xubnaha Golaha Wakiilladu iyo Golaha Fulinta inta ay xilka hayaan looma xiri karo loogumana yeeri karo inay maxkamadda horteeda qiraal ka baxshaan, marka laga reebo dacwadaha madaniga ah.